'Zimbabweans in the diaspora will vote, but just not now' | IOL News
Africa / 28 April 2018, 12:21pm / Jonisayi Maromo
Renowned Zimbabwean human rights lawyer based in South Africa, Gabriel Shumba, says he will continue to push the Zimbabwean government to allow millions of Zimbabweans in the diaspora to vote in elections back home. Picture: ANA/Jonisayi Maromo
Johannesburg - Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa's government is considering ways to enable millions of its citizens based in other countries to cast their votes, Consul General Batiraishe Henry Mukonoweshuro told a belated Zimbabwe 38th Independence Day commemoration in Johannesburg.
"I know there is a lot of clamouring for the diaspora vote; it is a thing that the government is thinking about. I think there is going to be an alignment of the electoral laws and the Constitution, [but] in terms of logistics it just may not be possible this year," Mukonoweshuro told the gathering of diverse Zimbabweans on Friday.
Last month, the Constitutional Court of Zimbabwe reserved judgment in the diaspora-based Zimbabweans' bid to participate in the upcoming elections from their foreign bases across the world.
Shumba, who was also at the belated 38th Independence Day commemorations hosted by the consulate, told the African News Agency (ANA) that his Zimbabwe Exiles Forum (ZEF) was "excited" by the new administration in Zimbabwe's exploration of the diaspora vote.
"The ZEF is excited that the new dispensation considers the diaspora as one of the bastions for meaningful development in Zimbabwe. We in particular welcome the statement made by the CG [Mukonoweshuro] today in Johannesburg that the diaspora vote is being considered by the government, and that the electoral laws will be aligned to make this a reality," said Shumba.
Earlier, Shumba - a victim of torture who has been living in South Africa for the past 15 years - told ANA that Zimbabwe was now seemingly on the rebound.